होसियार !मुख धुँदा भुलेरपनि नगर्नुस यी ५ गल्ती नत्र यहि कारणले डण्डिफोर आउँछ – mero sathi tv
होसियार !मुख धुँदा भुलेरपनि नगर्नुस यी ५ गल्ती नत्र यहि कारणले डण्डिफोर आउँछ
On १७ चैत्र २०७४, शनिबार १८:१९
मुख धुने काम भनेको एकदमै सजिलो काम हो, तर सजिलै काम गर्दा पनि विशेष ध्यान पुर्याउन सकिएन भने त्यसैले विभिन्न किसिमका नकारात्मक समस्याहरू ल्याउन सक्छ- डण्डिफोर आउने, छाला चिलाउने, छाला फुस्रो हुने, आदि।फेरि यो डण्डिफोर भनेको यस्तो समस्या हो जुन हाम्रो प्रतिरक्षा शक्तिको कारण पैदा हुन्छ। मतलब छालामा भएका सुक्ष्म प्वालहरूमा विभिन्न किसिमका फोहोर अनि ब्याक्टेरियाहरू टाल्लिएर बसेका हुन्छन्, जसले गर्दा सङ्क्रमण हुन थाल्दछ। त्यसपछि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको मूख्य अङ्ग ‘सेतो रक्तकोष’ले ती सबै सङ्क्रमित कोषहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर डण्डिफोरको रूपमा बाहिर पठाउने गर्दछ।
गल्तीः विशेष गरी जाडो मौसममा मानिसहरू चिसो पानी छुन डराउँछन्। अनि नुहाउँदा, मुख धुँदा तातो-मनतातो पानीको प्रयोग गर्छन्। तर उनीहरूले यो विचार गर्दैनन् कि, तातो पानीले अनुहारको चिल्लोपना हटाउँदछ र राम्रा ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा अनुहार फुस्रो हुने, एलर्जी हुने हुन्छ।
गल्तीः ठीकै छ ल, मुख धुँदा सबै विधि पुर्याएर धुनुभयो, अब तपाईँले गर्ने गल्ती भनेको के हो थाहा छ? फोहोर तौलियाले अनुहार पुछ्ने! बरु नपुछ्नुस्, त्यत्तिकै सुक्न दिनुस्, तर फोहोर लुगाले पुछ्ने काम नगर्नुहोस्। ल त्यो पनि ठीकै छ, तौलिया सफा नै छ, अब अधिकांशले के गर्छन् भन्दा तौलियाले जथाभावी अनुहारमा रगड्न थाल्छन्। के सिसा पुछेको हो र?
जान्नुहोस् ‘R’ बाट नाम सुरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन्
अन्त्यमा सलमान खान नेपाल आउने नै भए
निर्देशक पौडेलले गरे दोश्रो बिहे
सुन्दा पनि अचम्म, जहाँ १६ पटक सूर्योदय र सूयास्त देखिन गरी होटल बन्दै छ
प्रिया प्रकाशको नयाँ भिडियो फेरी भयो भाईरल
सन्तोष सुवेदीलाई 'बोल्नी मन छ अति’बाट राम्रो प्रतिक्रिया